Flickr Uploadr သည်နေ့ကိုကယ်တင်သည်။ | Martech Zone
Flickr Uploadr သည်နေ့ကိုကယ်တင်သည်။
တနင်္ဂနွေ, ဇွန် 3, 2007 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 4, 2011 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်သည်ကျိုးနွံသောအသုံးပြုသူတစ် ဦး ပါ Flickr ကို နှင့်တကယ်ကအများကြီးမပွုပါပွီ။ Flickr ကိုအသုံးပြုရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကငါလုပ်နိုင်တဲ့ group feature ပါ Indy Group ကိုရွေးချယ်ပါ ဝက်ဘ်ဆိုက်အဘို့ ငါ Indy ကိုရွေးချယ်ပါ။ Joining Groups သည်မည်သည့်လူမှုရေးကွန်ရက်မဆို၏သော့ချက်ကျသောလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးသည်၎င်းတို့အား ဆက်၍ ကမ်းလှမ်းနေပုံရသည်။
My သား လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ကအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး (လေးစားထိုက်သော ၃.၈၁ GPA၊ အသေးစားပညာသင်ဆုဖြင့်) နှင့်ရူပဗေဒအစီအစဉ်တွင်လက်ခံခဲ့သည် IUPUI) ။ ငါဘွဲ့ရမှာလက်တဆုပ်စာဓာတ်ပုံတွေကိုယူ။ , သူတို့ကိုချွတ်နှင့်ငါတို့ဆွေမျိုးသားချင်းများအားလုံးကိုသူတို့ကိုပို့ခဲ့သည်။ ချက်ချင်းပဲငါပြproblemsနာတွေစတင်ဖြစ်ပွားလာတယ်။ အချို့သောလူများကဖိုင်ကိုရပြီးဖွင့်မရနိုင်သည်၊ အချို့ကအဂတိလိုက်စားမှုရှိနေပြီးအချို့ကလုံးဝမရရှိခဲ့ကြပါ။
ဒီနေ့မနက်မှာငါပုံတွေကို Flickr မှာ upload တင်ပြီးမိသားစုကိုဝေမျှလိုက်တယ်။ ငါတကယ် ... ဖြစ်စဉ်ကိုကြောက်ခဲ့သည် ... upload, edit, upload, edit, upload, edit ။ ငါစတင်မတိုင်မီငါသွားရောက်ခဲ့သည် Flickr ၏ Tools အပိုင်း ဘာတွေပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ဖို့ Flickr Uploadr ကိုငါတွေ့တယ် -
ဒါဟာအံ့သြလောက်အောင်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့! ကျွန်ုပ်၏တစ်ခုတည်းသောတိုင်ကြားချက်မှာ၎င်းသည်ကိရိယာများရှိပုံများကိုမှန်ကန်သော orientation ဖြင့်ပြသခြင်းမဟုတ်ပါ (၎င်းတို့သည်မှန်ကန်သော orientation ဖြင့်တင်ခဲ့သည်) ထို့ကြောင့်ငါဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရှာဖွေရန်အချိန်အနည်းငယ်ဖြုန်းတီးခဲ့သည်။ ပုံတွေတင်ပြီးတာနဲ့ငါ set တစ်ခုလုပ်ပြီးငါ့မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူမျှဝေလိုက်တယ်။ (သူငယ်ချင်း ၅၀ နဲ့မိသားစုကိုတစ်ချက်တည်းနဲ့အီးမေးလ်ပို့နိုင်တယ်)
တော်တော်အေးမြ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Flickr! အနာဂတ်မှာပုံတွေကိုတကယ်ပြသနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေပိုများလာမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါ Flickr ကိုဝင်ပြီးကတည်းကလပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီးဘေးဘားများ၊ Flash ဖိုင်များ၊ ဆလိုက်ရှိုးများ၌သင်၏ပုံများကိုအမှန်တကယ်ပြသရန်အပိုဆောင်းကိရိယာများရှိပုံမပေါ်ပါ။
ထိပ်ဆုံး Spamming ISP ၁၀ ခုသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်
PHP: SimpleXML ကိုတင်သလား။
ဇွန် 3, 2007 မှာ 12: 22 pm တွင်
၎င်းကိုအသုံးပြုသူတိုင်း အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအင်တာဖေ့စ်ကိုတွေ့သောကြောင့် ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအားလုံးနီးပါးကို Flickr ကိုအသုံးပြုရန် စီမံထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏အိမ်တွင် ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည် ကျွန်ုပ်၏ Macbook နှင့် iPhoto တို့ကို လှည့်ပတ်နေသော်လည်း Flickr က အခမဲ့ပေးသော သီးခြားအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုရှိသော်လည်း ၎င်းသည် iPhoto နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းမရှိပေ။ iPhoto တွင် တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းပြီး အပ်လုဒ်တင်ခြင်း + တဂ်လုပ်ခြင်း နှင့် လုံးဝဥပေက္ခာပြုလုပ်ပေးသည့် 'FlickrExport' ကို $10 ခန့်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သည်။
Flickr လိုမျိုး တစ်ခုခုကို သုံးခွင့်ရဖို့က ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ မဟုတ်ရင် ကင်မရာကို ပလပ်ထိုးပြီး ဓာတ်ပုံတွေကို ရွှေ့ဖို့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သန်းပြီးပြီမို့ အဆင်မပြေပါဘူး။
အကြီးမားဆုံးပေါ်လွင်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်၏ Nokia N95 - ချက်ချင်းရိုက်ချက် + အပ်လုဒ်တင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ်ပေါ်က ရိုက်ချက်တော်တော်များများကို 5MP နဲ့ ရိုက်ထားတာ တော်တော်များနေပြီဖြစ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ကင်မရာနဲ့ မယှဉ်နိုင်ပေမယ့် ဘလော့ဂ်ပုံတွေအတွက် လုံလောက်ပါတယ်။
ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ Zooomr ကိုရောက်ပြီ၊ ဒီအရာက ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲဆိုတာကို အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ တခြားသူတွေ အများကြီးရှိမှာ သေချာပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီမနက် လော့ဂ်အင်ဝင်နိုင်ပေမယ့် အလွန်အမင်း နာကျင်စေတဲ့ ပုံတွေကို အပ်လုဒ်တင်တာ တွေ့တယ်၊ ပိုကောင်းတဲ့ ရိုက်ချက်တချို့ကို ရောင်းချင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် နာကျင်မှု/ပျော်ရွှင်မှု အချိုးက အခုမှ မကြီးဘူး။
ဇွန် 3, 2007 မှာ 12: 30 pm တွင်
ကျွန်ုပ်သည် Flickr ကို အစောပိုင်းတွင် လက်ခံသူဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ကြီးထွားလာခဲ့ခြင်းမှာ သေချာသည်... နှင့် ၎င်းသည် ဗီဒီယိုဂိမ်းမျက်နှာပြင်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်မည်ဟု ထင်မြင်လာကာ ယခုအခါ ၎င်းသည် ဓာတ်ပုံဖြေရှင်းချက်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ဦးနှင့် ကျွန်ုပ်သည် Flickr ကဲ့သို့သော ပြင်ပဓာတ်ပုံပရိုဂရမ်များစွာ၏ အကောင်းဆုံးကိုယူဆောင်သည့် WordPress ဓာတ်ပုံပြခန်း ပလပ်အင်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုတွင် လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း ၎င်းအား သင်၏ဓာတ်ပုံများ၊ ပြသမှုများ၊ စသည်တို့အားလုံးကို သင်၏ WordPress ထည့်သွင်းမှုမှ လုံးဝထိန်းချုပ်ထားသည်။ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအရာများကို အကြောင်းပြန်ရန် မလိုအပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့တွင် လုပ်ဆောင်နေသော အထောက်အထားတစ်ခုရှိပြီး လာမည့်ရက်အနည်းငယ်အတွင်း ၎င်းသည် 1.0 ထွက်ရှိမှုအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
မင်းလမ်းကို သေချာပို့ပေးလိုက်မယ် 🙂
အထက်တန်းကျောင်းအောင်မြင်ပြီး steller GPA ဖြင့် Bill ကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။
မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲက လွဲနေတဲ့အရာတစ်ခုက မင်းနဲ့မင်းရဲ့သားပုံ... ဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ဟဲဟဲ… ဂုဏ်ယူတဲ့ ဖေဖေကို ကြည့်ရအောင်နော်။
ဇွန် 3, 2007 မှာ 1: 26 pm တွင်
Sean ကိုတွေ့ဖို့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ မင်းလက်လွတ်သွားတာကို ငါမယုံဘူး။ ငါ့သားနဲ့သမီးနဲ့ ငါ့ရုပ်အကြီးကြီး -အဲဒီမှာရှိတယ်။
ဇွန် 3, 2007 မှာ 1: 32 pm တွင်
ကျွန်ုပ်သည် ယနေ့နှောင်းပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်၏ site ပေါ်တွင် အယူအဆဆိုင်ရာ အထောက်အထားများ ရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သင့်ထံသို့ အီးမေးလ်တစ်စောင်လည်း ပေးပို့လိုက်ပါမည်။
အလို။ မင်းနဲ့ မင်းမိသားစုရဲ့ ဒီပုံလေးကို ငါဘယ်လိုလွမ်းမိလဲ။ ဂုဏ်ယူစရာတွေ အားလုံးကို ကြည့်လိုက်ပါ။
ဇွန်လ4ရက် 2007 ခုနှစ် နံနက်7နာရီ 32 မိနစ်
Bill နဲ့ မင်းကိုလည်း အသဲကွဲစွာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်။
သင့်ဓာတ်ပုံအားလုံးကို flickr မှဒေါင်းလုဒ်လုပ်လိုပါက ဤနေရာလေးကို သိမ်းထားပါ။
wordpress မှာ အရာရာတိုင်းအတွက် ကူညီပေးတဲ့အတွက် Doug ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 🙂 မင်းက ငါ့ကို ဟိုနေ့က ဟင်းချိုထဲက ထုတ်ပေးခဲ့တာ 🙂